Ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena dia mamerina dingana lehibe mankany amin'ny lalana marina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena dia mamerina dingana lehibe mankany amin'ny lalana marina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena dia mamerina dingana lehibe mankany amin'ny lalana marina.
Taorian'ny fameperana efa ho roa taona, dia manomboka amin'ny alatsinainy ny fiverenan'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena, rehefa afaka tafahaona soa aman-tsara ny fianakaviana sy ny namana efa nisaraka ela, ny mpandeha dia afaka mijery ity firenena mahagaga ity, ary afaka mifandray indray amin'ny vondrom-piarahamonina manerantany i Etazonia.
Ny indostrian'ny fitsangatsanganana amerikana dia handray ireo mpitsidika iraisam-pirenena rehetra efa vita vaksiny hiverina any Etazonia taorian'ny 19 volana nisian'ny fameperana sisintany mifandraika amin'ny areti-mifindra nanomboka ny 8 Novambra.
Manokatra indray ny 'dingana manara-penitra mankany amin'ny lalana marina,' na dia ilaina aza ny loharanon-karena federaly fanampiny hamahana ny tsy fahampian'ny fanodinana visa.
Tamin'ny taona 2019, ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena dia namokatra $ 239 miliara amin'ny fidiram-bolan'ny toekarena amerikana ary nanohana mivantana ny asa amerikana 1.2 tapitrisa.
Any amin'ny seranana fidirana an-habakabaka, an-tanety ary an-dranomasina, ary manerana ny toerana misy ny firenena, ny indostrian'ny fitsangatsanganana amerikana dia handray ireo mpitsidika iraisam-pirenena rehetra efa vita vaksiny hiverina any Etazonia taorian'ny 19 volana nisian'ny fameperana sisintany mifandraika amin'ny areti-mifindra nanomboka ny Alatsinainy (8 Novambra), dingana iray nandrasana hatry ny ela izay manamarika ny fananganana indray ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena.
Ity hetsika ity dia dingana voalohany manan-danja amin'ny famerenana ny tsenan'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena tena mahazo tombony. Tamin'ny taona 2019, ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena dia namokatra $ 239 miliara amin'ny fidiram-bolan'ny toekarena amerikana ary nanohana mivantana ny asa amerikana 1.2 tapitrisa.
Taorian'ny fameperana efa ho roa taona, dia manomboka amin'ny alatsinainy ny fiverenan'ny dia iraisam-pirenena, rehefa afaka tafahaona soa aman-tsara ny fianakaviana sy ny namana efa nisaraka ela, ny mpandeha dia afaka mitsidika ity firenena mahagaga ity, ary ny US dia afaka mifandray indray amin'ny fiarahamonina manerantany. Andro lehibe ho an'ny mpandeha, ho an'ny vondrom-piarahamonina sy orinasa miankina amin'ny fitsidihana iraisam-pirenena, ary ho an'ny toekaren'i Etazonia amin'ny ankapobeny.
Ireo firenena tratran'ny fitsangatsanganana voarara — izay nahitana an'i Royaume-Uni, Irlandy, ireo firenena 26 ao amin'ny faritr'i Schengen, Afrika Atsimo, Iran, Brezila, India ary Shina — dia 17% monja amin'ny firenena rehetra eran-tany fa 53% tsy mitovy amin'ny any ampitan-dranomasina. mpitsidika any Etazonia amin'ny 2019.
Nikatona ihany koa ny sisin-tany miaraka amin'i Kanada sy Meksika — ireo tsena roa voalohany miditra any Etazonia.
November 14, 2021 amin'ny 06: 51
Na dia dingana lehibe mankany amin'ny lalana marina aza ny fanokafana indray ny sisin-tanintsika, dia mbola betsaka ny asa atao mba hiantohana ny fanarenana indray ny iraisam-pirenena. Tokony hanohy ny fialana amin'ny dia tsy ilaina amin'ny toerana rehetra ianao. Na inona na inona sata fanaonao amin'ny vaksiny: mijanòna amin'ny hetsika COVID-19.